Kpido: kpọọ ime ihe | Martech Zone
Kpido: kpọọ ka ime ihe
Ụdị ahịa ahịa ọdịnaya B2B
Wednesday, September 22, 2021 Wednesday, September 22, 2021 Douglas Karr
Ọrịa ọjọọ kpaghasịrị usoro azụmaahịa nke ndị ahịa ka azụmahịa na-emegharị ihe gọọmentị mere iji nwaa igbochi mgbasa ngwa ngwa nke COVID-19. Ka emechiri ọgbakọ, ndị na -azụ B2B kwagara n'ịntanetị maka ọdịnaya na akụrụngwa mebere iji nyere ha aka n'ogo nke njem onye zụrụ B2B. Ndị otu nọ na Digital Marketing Philippines achịkọtala infographic a, ụdị azụmaahịa ọdịnaya ọdịnaya B2B na 2021 nke na -eme ka usoro 7 dị n'etiti etu ọdịnaya B2B dị.
Anyị niile anụla na ihe oyiyi bara uru otu puku. Nke a enweghị ike ịbụ eziokwu taa ka anyị na-ahụ otu n'ime mkparịta ụka nkwukọrịta kachasị egwu oge niile-nke ihe oyiyi na-aga n'ihu iji dochie okwu. Onu ogugu mmadu na-echeta nani 20% nke ihe ha guru ma 80% nke ihe ha huru. 90% nke ozi a na-ebute na ụbụrụ anyị bụ nke anya. Ọ bụ ya mere ọdịnaya anya jiri bụrụ ụzọ kachasị mkpa
Kedu ezumike 2020 kụziiri anyị gbasara atụmatụ azụmaahịa ekwentị na 2021
Mọnde, Jenụwarị 11, 2021 Mọnde, Jenụwarị 11, 2021 Joe Intile
Ọ na-aga n'ekwughị, mana oge ezumike na 2020 adịghị ka nke ọ bụla ọzọ anyị nwerela dị ka okike. Site na mgbochi mmachi mmekọrịta mmadụ na-ejigide ya n'ụwa niile, omume ndị ahịa na-agbanwe site na usoro ọdịnala. Maka ndị mgbasa ozi, nke a na-ewepụ anyị na usoro ọdịnala na nke si n'ụlọ (OOH), ma na-eduga n'ịdabere na mkpanaka na mmekọrịta dijitalụ. Na mgbakwunye na ịmalite n'oge gara aga, ịrị elu a na-enwetụbeghị ụdị ya na kaadị onyinye ndị enyere onyinye ga-agbatị ezumike ahụ
Nchịkọta atụmatụ atụmatụ weebụsaịtị: 67 Ultimate Must-Haves for Your Site
Fraịde, Ọktọba 2, 2020 Bọchị Sọnde, Machị 7, 2021 Douglas Karr
Chaị. M hụrụ ya n'anya mgbe mmadụ na-echepụta ndepụta nyocha na infographic nke dị mfe ma na-ezi ozi. UK Web Host Review haziri akwụkwọ ozi a iji mepụta ndepụta nke atụmatụ ha kwenyere na a ga-etinye yana azụmaahịa ọ bụla 'dị n'ịntanetị. Maka azụmahịa gị iji nwee ihe ịga nke ọma n'ịntanetị ị kwesịrị ijide n'aka na ebe nrụọrụ weebụ gị jupụtara na ya! E nwere ọtụtụ obere nkọwa nke nwere ike ime ihe niile dị iche - ma na inye ndị ahịa
Ihe kpatara I Ji Kwesiri itinye ego na vidiyo vidiyo na saiti Ecommerce gị
Tọzdee, Ọktoba 18, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Vidio vidio na-enye ndị na-ere e-ụlọ ahịa ụzọ okike iji gosipụta ngwaahịa ha ma na-enyekwa ndị ahịa ohere ịlele ngwaahịa na ọrụ. Ka ọ na-erule 2021, a na-eme atụmatụ na 82% nke ịntanetị niile ga-abụ nke oriri vidiyo. Otu ụzọ azụmahịa eCommerce nwere ike isi nweta nke a bụ site na ịmepụta vidiyo vidiyo. Ọnụ ọgụgụ na-agba ume vidiyo vidiyo maka saịtị Ecommerce gị: 88% nke ndị nwe ụlọ ahịa kwuru na vidiyo vidiyo na-abawanye ọnụego ntụgharị ngwaahịa vidiyo vidiyo.